मोनालिसा सम्बन्धी केही रोचक तथ्यहरु ! Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
मोनालिसा सम्बन्धी केही रोचक तथ्यहरु !
यो पेन्टिंग पटक पटक चोरी भएको पनि थियो । एकपटक त अर्का प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासोलाई समेत यो पेन्टिंग चोरी गरेको आरोप लगाईएको थियो ।
विश्वविख्यात चित्रकार लियोनार्दो दा भिन्चीले बनाएको मोनालिसाको पेन्टिंग संभवतः विश्वमा सबैभन्दा धेरैले चिन्ने पेन्टींग हो भनेमा सायद त्यो सही नै ठहरिएला । मोनालिसाको रहस्यमयी मुस्कानले यो पेन्टिंगलाई विशेष बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । आउनुहोस् यही विश्वप्रसिद्ध पेन्टिंगका बारेमा केही रोचक कुरा गरौं ।
मोनालिसाको पेन्टिंग इटालियन चित्रकार लियोनार्दो दा भिन्चीले सन् १५०३ मा बनाएका थिए । यो पेन्टिंग बनाउन लियोनार्दोलाई चारवर्ष लागेको थियो ।
यो काठमा बनाईएको आयल पेन्टिंग हो जसको साईज ३० इञ्च अग्लो र २१ ईन्च चौडा छ ।
यो पेन्टिंग लियोनार्दोले फ्लोरेन्सका एकजना व्यापारीकी श्रीमती घेरार्दिनी नामक महिलालाई हेर्दै बनाएका हुन् भन्ने विश्वास रहेको पाईन्छ । तर लियोनार्दोले नै आफुलाई महिलाको रुपमा चित्रित गरेका हुन् भन्ने अर्कोथरी मत पनि रहेको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा नाजीहरुबाट बचाउनका लागि यो पेन्टिंगलाई ६ ठाउँमा सारिएको थियो ।
हाल यो पेन्टिंग फ्रान्सको लुभ्र संग्राहलयमा छ ।
यसलाई जतनका साथ राख्नको लागि नफुट्ने र नटल्किने एककिसिमको विशेष बुलेटप्रुफ शिशाको पत्र लगाईएको छ ।
इटालियन चित्रकार लियोनार्दोले बनाएको यो पेन्टिंग फ्रान्समा कसरी पुग्यो भनेर एक किसिमले सबैलाई अचम्म लाग्ने गर्छ कि । खासमा १५१६ मा फ्रान्स आउँदा यसलाई लियोनार्दोले यो पेन्टिंगलाई पनि साथमा ल्याएका थिए । पछि उनको फ्रान्समै निधन भयो । यो पेन्टिंग लियोनार्दोकै एक शिष्य सलाईलाई हस्तान्तरण गरियो । भनिन्छ, सलाईले फ्रान्सका राजालाई त्यो पेन्टिंग बेचेका थिए । फान्सेली क्रान्तीपछि यसलाई लुभ्र संग्राहलयमा राखियो ।
कतिपयले यो पेन्टिंग अझै पनि अधुरो छ पनि भन्ने गर्छन् ।
२०७७ भदौ २५ गते १९:५७ मा प्रकाशित